Unique Dị Iche Iche Self adịzi Scooters - Jomo Technology Co., Ltd
The mannequin nwere na-kpebisiri ike dị kwa na àgwà nke moto. Ee, ọ na-aga ego ị a otutu ego, Otú ọ dị na-ewere a lee anya na-ewu, na n'oké àgwà nke na-ewu nke a dị ize ndụ nwata, ị na-ekpe na-eche ma ma ọ bụ na ọ bụ a transformer nọ n'ebe zoro ezo. Easily rechargeable, mfe ịchịkwa ọbụna n'ihi na ndị a nke anyị na-adịghị na njem a skateboard ma ọ bụ Electric longboard, Na-azọpụta mmanụ ụgbọala ego, iji mfe remotes, ihe na-na-adịghị n'anya banyere nke a stof? Ọ ga-eme ka wheel na akpa ogho kpam kpam na pụrụ ịkpata nsogbu gị onwe ma ọ bụ mmerụ okwu gburugburu gị. The ụkwụ abụọ nwere a inogide ahụ n'etiti ha ebe onye nwere ike ịchọta adade ebe. Siri ike karị ga-abụ na a ga-agabiga bumps na ụzọ. Ha nwere tiller imewe na-ekwe ihe ikpere ụlọ na n'iru management, ngwa isonyere batrị mkpọ, kemeghi oche elu na ịmapusị na-àmà na taya. Ekele, m na-atụ egwu na oke ụlọ ọrụ dabere na uka n'ichepụta ga-ahụ ihe m nwere ike hụrụ na-azọpịa ọwụwa teknụzụ nwere pụtara ndabere. Anyị na-anwale na niile nke n'oge ogbo njehie na-ahụ ma ọ bụ ọbụna na-abara anyị uru oge nyochaa ya ọzọ.
Echiche anyị na-akọwa n'ezie-ndụ ahụmahụ na n'ezie mbadamba - Koowheel Smart Balance wheel K8 bụ nnọọ uru na ezi uche n'ihi na ha dị nnọọ obere na ọ e mere na Milan, ọ bụ na mbụ EU ahịa ahaziri. Na otu aka, Zoro Ezo emefu imewe, mfe buuru; N'aka nke ọzọ, pụrụ n'ụzọ wheel imewe, mfe enwetaghị anya n'etiti nkezi nlereanya. Ọzọkwa, ọ bụ ebughibu na ìhè arọ.
E nwere ọtụtụ nke iche nke ike ọsọ controllers, na nnọọ iche ike. The braking na osooso nwekwara ike ịbụ na umengwụ; n'ụzọ dị mwute agba ike breeki ma ọ bụ adị n'elu mgbe mbịne na ụzọ ọzọ nke wheel na moto adịkwa traction ibelata gị ike ịkụda na ike ọsọ elu. Ma Koowheel electric hoverboard K8 bụ pụrụ iche, n'ihi na max ọsọ bụ 10km / h, mgbe moto si ọsọ esịmde ọnọdụ ịdọ aka ná ntị na-agba nke 10km / h, ịdọ aka ná ntị ome uzu Mkpu; mgbe ya n'okpuru ndị na-agba ịgba (setịpụrụ bara uru: 10km / h), ịdọ aka ná ntị ome uzu adịghị mkpu. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ nchekwa tụnyere ndị ọzọ nkịtị scooters. Ị nwere ike iche banyere kwa ngwa ngwa ka braking adọ.
N'ezie onye na niile a n'ụdị na o sina-agba ịnyịnya mma! Iji malite njem gị niile na ọ bụ a ga-eme bụ kwụpụ na na otu ụkwụ na-atụ anya duru ìhè na praịm nke igwe na-enwu. N'ihi nke a dị iche iche sịrị na ahịa kpebisiri ike iji rụọ onwe adịzi skuuta . Tupu ị aghọta otú ihe electric skateboard ọrụ, ị ga-enwe ike ịghọta ihe ị na-eji eme ya. On ihu nke ya, nke na-agaghị nnoo na-paradigm na oke ọnụ ọgụgụ obibi ojiji nke 3-D tech. Print media ga-emegharị, obi abụọ adịghị kwesịrị ekwesị n'ime ụlọ nakwa dị ka na mpaghara. The ngwa ngwa ọ na-aga, na-mma ka kwụsie ike; iji nwayọọ na anyị na-aga, ọ na-enyo n'ime a otutu ihe siri ike na-itule. Otú ọ dị, elu na voltaji ị na-agba ọsọ, na-costlier ọ ga-enweta. Nke ahụ pụtara na ngwaahịa na-arahụ site na gọọmenti na-usoro nche ule, nwale nke eletriki na batrị, chaja na programmụ na pụtara na-mma.
Post oge: Jan-12-2018